Guuxa isku midka ah ee baabuurta oo kordhiya in shukaanta lagu seexdo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Rufus Ollberg Jägemar/SR Gotland
Guuxa isku midka ah ee baabuurta oo kordhiya in shukaanta lagu seexdo
La daabacay onsdag 31 juli 2013 kl 13.57
Guuxa isku midka ah oo aan dhawaaq dheereen oo waddooyinka ka socda waxay keeni karaa khatar ah in wadayaasha baabuurtu seexdaan iyagoo baabuur wada. Waxaana sidaas lagu muujiyey daraasad cusub oo uu sameeyey machadka qaranka ee waddooyinka iyo gaadiidka oo af-iswiidhishka loogu gaabiyo VTI.
Laakiin natiijada daraasadda kama aysan muuqan heerka gama’u kordhayo guuxaas baabuurta awgiis. Weli daalku waa uu jiraa xataa haddii dareewalku xooga nasto oo kadibna safarkiisa ku wato waddo tii hore ka guux yar. Mana kala cadda xiriirka u dhexeeya haddii ay maalin tahay iyo haddii ay habeen tahay.
Waxaan jirin dhabbatus ku saabsan habka loo qiyaasayo heerka uu le’ekaanayo guuxa ka yimaada waddooyinka ama baabuurta, laakiin dhowaan waxaa laga bilaabayaa mashruuc ay iska kaashanayaan VTI iyo jaamacadda Linköping, kaasoo lagu doonayo in waddooyinka laamiga ah hoos loo dejiyo si loo yareeyo guuxaan lulada keena.